Arragtida shacabka Puntland ee Shilaalka Gadiid ee Puntland kadhaca (dhegayso) – Radio Daljir
Arragtida shacabka Puntland ee Shilaalka Gadiid ee Puntland kadhaca (dhegayso)
Maajo 2, 2018 5:10 g 0
Magaalada Bosaaso xiliga Xagaa baxa waxaa aad ugubadan shilalka gaadiidka dadweyna , waxayna dadku ay arintan usababeeyeen mas,uuliyad daro intabadan ka timaada Darawalada gaadidkaasi wadayaasha ka ah.
Arimaha ugu badan ee shilalkaasi sababta u ah oo darawalada lagu eedeeyay ayaa waxaa kamid ah ,khibradooda Darawalnimo oo yar , isticmaalka ku hadalka Telfoonka, iyo isticmaalka facebook iyo wixii la halmaala.
Arinta kale oo iyana loo sababeeyay shilalka gaadiidka ayaa ah dowladda oo aan sharuuc adag iyo ganaaxba ku soo rogin Darawalada sida xawliga ah ugu dhexsocda magaalada Gudaheeda iyo dibadeeda .
Shacabka ku dhaqan Magaalada Bosaaso ayaa sidan kusheegay sababaha keena shilalkaasi khasaaraha dhaliya.
Dowladda Somaaliya oo Lacag ugu deeqday Shacabka Baladweyne
Qoys Biriq ku dhacday gobalka Galgaduud iyo Xaladda qoyskaas (dhegayso)